Saika hampiseho ny fahaizany mitam-basy: miaramila mamo maty nahatifi-tena | NewsMada
Hamamoana niafara tamin’ny fahafatesana. Maty tsy tra-drano rehefa nahavoapotitra tsy nahy ny basy teny aminy ny miaramila kaporaly iray saika haneho fomba fampiasana basy tao anatina tsenakely nisotrosotroany tao Anjozorobe.
Tranga mampalahelo. Miaramila iray miasa ao amin’ny fokontany Beronono, distrikan’Anjozorobe no maty tsy tra-drano afakomaly. Araka ny fanadihadian’ny zandarimariam-pirenena, nisotro toaka tao amina tsenakely iray ao an-toerana io miaramila kaporaly io nanomboka tamin’ny 10 ora sy sasany maraina ny alarobia teo. “Niandry ny namany izy tamin’izay ka tratra hariva tao”, hoy ny fanamarihan’ny zandary avy ao Ambatomanoina. Rehefa tokony ho tamin’ny 04 ora sy sasany teo, saika hampiseho ny fomba fampisana basy tamin’ireo mpividy tao amin’ilay tsena nisotrosotroany ny lehilahy. Vokany, nesoriny tamin’izay ny “boite à chargeur” ny basy teny aminy. Voapotsitra tsy nahy anefa ny “détente” ny basy ka nahavoa azy avy hatrany. Maty tsy tra-drano io kaporaly 30 taona io rehefa nahazo ny saokany sy nivoka teo amin’ny lohany ilay bala efa voafahana tao anaty basy teny aminy. Tsy nijanona tokoa izany raha tsy teny amin’ny valindrihan’ilay tsenakely mihitsy tamin’izay. Tsiahivina fa niasa vao roa volana tao amin’ny “détachement autonome de sécurité” ao Antsahatanteraka, fokontany Ambodimadiro, kaominina Beronono io miaramila io talohan’izao tranga izao.
Taorian’ny voina, nanokatra fanadihadiana ny raharaha ny zandary avy ao Beronono. Nijery ny vata-mangatsiakan’ilay miaramila maty ny mpitsabo ao an-toerana. Taorian’izay, nogiazana ao amin’ny biraon’ny zandary ao Beronono ny basy mahery vaika nahafaty io kaporaly io.